Semalt Expert: Kugadzirisa Nyaya Yokuzvipa Zvokuita MuGoogle Analytics
Dzimwe nguva, chigaro cheumwe chinogona kuonekwa mumashoko eGoogle Analytics sechikamu chemugwagwa. Icho chinetso chinokurudzirwa nevanokurudzira sezvo chinogona kukonzera matambudziko nekubika uye kupa mhinduro dzisingatendwi. Kana munhu asingakwanisi kupedza kubvuma-kutumira nyaya, zvinogona kutungamirira kune zvinyorwa zvingaguma zvinogona kukonzera kukanganisa kuita zvisarudzo zvekutsvaga mishandirapamwe - marka sorgu. Mukuwedzera kune izvi, zvinenge zvisingakwanisi kutora chikwereti chekutengesa chakabatsira kubvisa kutendeuka kwenhamba ye nzvimbo.
Muzviitiko zvizhinji, dambudziko rinomuka nekuda kwekukundikana kweGoogle Analytics kugadzirisa zvakanaka, kana kuti muridzi wekuita kusarurama kwekuwedzera.
Jack Miller, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Mutevedzeri we Semalt , anorondedzera pano zvinhu zvinokonzera uye nzira yekuzvigadzirisa. Uyezve, anopa kuongorora kwepasi rose kugadzirisa pakuguma kuderedza nhamba yezvokuzviisa kune nzvimbo.
Kufambisa kwekutengesa ndiyo chikamu chemotokari inosvika pane imwe nzvimbo kubva kune imwe nzvimbo. Inogona kunge iri muchimiro chekubatanidza kune imwe nzvimbo. Ikubatanidza hakufaniri kuva nemupiro wemushandirapamwe zvimwe zvingazoreva sekutumira spam. Kusiyana ne spam, analytics inowanzoona kuti spam inobva kupi uye inoratidza mazita emadziro anoita kuti iite.
2. Mapeji Asina Code Tracking
Vanhu pavanokanganwa kutora mapeji avo, zvinova zvakaoma kuvatevera..Chigumisiro ndechokuti vanhu vanowana mazita avo pane peji yemicheto.
Gara: nguva dzose ita nechokwadi chekuisa kemo yekutevera pamapeji ose ari pawebsite. Kana munhu asina chokwadi nezvenzvimbo yepaiti, Mutambi weTags achauya asingakwanisi.
3. Mapeji Kudonha Cookie Data
Universal Analytics Cookie inofanira kushandiswa kana ichikwira pakati pemapeji. Kana imwe peji inodonha cookie pane chimwe chikonzero, sangano rinopera. Nokudaro, hoki itsva inotanga kusika musangano mutsva. Mumwe anofanirwa kuve nechokwadi chekuti vanoongorora mapeji ose ekutenderera anoziva kuti kuzviteterera kunotanga kushandisa shanduro yechipiri.
Rongedza: Enda nemapeji kuti uzive kuti nyaya inotanga uye nei ichiita. Kana imwe nyanzvi ichinyatsoziva chinokonzera dambudziko racho, inowedzera kuitora. Kana kugadzirisa kuchiuya nyore, enda mberi uye kugadzirisa. Kana zvakaoma, munhu anofanira kusanganisira nyanzvi yekugadzira iyo inofanirwa kunyatsoziva kukosha kwekugadzirisa dambudziko uye oita kuti varigadzirire.
Dzimwe makambani angave nemazita akawanda, uye dzimwe nguva vanowana chido chekubatanidza basa remuenzi kune dzakawanda. Kana ikashanda zvakajeka, vanofanira kuve nechokwadi chokuti cookie yepakutanga inoramba iripo. Zvechokwadi kubatanidza idzi mazita ndiyo nzira yekuenda nayo.
Rongedza: Iva nechokwadi chokuti ma cookies ose anoramba achigara kune dzimwe nzvimbo.
5. Session Timeout Myth
Kana chikamu chinopera mushure mimwe nguva, imwe sangano rinotanga. Zvinotendwa kuti zvisike itsva data data.
Rongedza: Mumwe anogona kuisa muganhu wenguva yepurogiramu yepamusoro uye oona zvinogadziriswa pachedu-kutumira.
Kutumira kunyoreswa kwemashoko ndeimwe nzira inobatsira kugadzirisa nyaya yekuzvidavirira zvakananga.